‘संकल्पका साथ अघि बढेका छौँ, शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’| Nepal Pati
क्रान्तिकारी भावनाको आवश्यकता अझै छ
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको दिन पार्टी एकता घोषणा गर्ने तयारी छ । २२ अप्रिल अर्थात् वैशाख ९ गते लेनिन जयन्ती र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको दिन एकता घोषणा गर्ने तयारी रहेको पार्टी एकता संयोजन समितिका सदस्य एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जानकारी दिए । नेपालले सरकार गठन र राष्ट्रपति, सभामुख लगायत निर्वाचनले गर्दा कार्यदलको काम केही प्रभावित भएको बताएका छन् । कार्यदलको काम नरोकिएको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगेर एकता संयोजन समितिलाई मस्यौदा बुझाउने उनको भनाइ छ । दुवै पार्टीको औपचारिक बैठकबाट राजनीतिक र सांगठनिक विषयलाई ग्रहण गर्ने र समितिले अन्तिम रुप दिएपछि एकता घोषणा सभामार्फत दुई पार्टी एक हुने नेपालले बताए । कार्यदलको विषयमा रहेर नेपाललाई चार प्रश्न गरेका छौँ ।
प्रश्न नंं १. मस्यौदा निर्माणको काम किन रफ्तारमा हुन सकिरहेको छैन् ?
आफ्नो इच्छा अनुसार मात्रै हुँदैन । छलफल चलाउनुपर्छ, धेरै कुरा मिलाउनुपर्छ । पछिल्लो समय हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान सरकारसँग सम्बन्धित काममा गयो । मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने थियो । यी काममा समय बित्यो । अझ सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य पक्षसँग वार्ता चलिरहेको छ । यसका अलवा दुई वटा कार्यदलले छलफल चलाइरहेका छन् । बुधबार मात्रै हामी राजनीतिक प्रतिवेदन सम्बन्धि कार्यदलको बैठक बस्यौँ । सबै मस्यौदालाई एक ठाउँमा ल्याएका छौँ । त्यसमा एक पटक फेरि छलफल चलाउँछौँ । त्यसपछि मस्यौदाको रुपमा आउँछ । त्यसपछि फेरि परिमार्जन गर्न सुझाव मागिने छ । अनि मात्र कार्यदलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनेछ र पार्टी एकता संयोजन समितिमा पेश गरिनेछ । त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । दुवै पार्टीमा पनि छलफल आवश्यक छ । छलफल गरेर टुङगो त लगाएका छैनौँ तर २२ अप्रिल (बैशाख ९ गते) एकता घोषणा सभा गर्ने सोचिरहेका छौँ । बितेको छैन, आत्तिनु पर्दैन ।
प्रश्न नं. २. राजनीतिक विषय भन्दा संगठनात्मक विषय मिलाउन गाह्रो छ भनिन्छ । खासमा के हो ?
संगठनात्मक विषयमा अलि बढी बहस हुन्छ । राजनीतिक विषयमा त्यति ठूलो बहस बनेको छैन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा, विभिन्न राजनीतिक दलहरूप्रतिको दृष्टिकोणको बारेमा, हामी अगाडि बढ्ने बाटोको बारेमा, हामीसँग रहेका चुनौती र सम्भावनाको बारेमा विवाद छैन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तको बारेमा, माक्र्स र समाजवादको दिशमा मुलुकलाई अगाडि बढाएर लाने बारेमा विवाद नभएकाले राजनीतिक विषयमा समस्या छैन् । जहाँसम्म संगठनात्मक विषय छ, त्यहाँ विभिन्न रायहरू आइरहेका छन् । छलफल चलिरहेको छ ।
प्रश्न नं. ३. कार्यदलको ढिलाइले पार्टी एकताप्रति शंका गर्नेहरूलाई थप खुराक मिल्यो नि हैन ?
शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन् । हामी पार्टी एकता गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यसबाट हामी पछि हट्दैनौँ । कुनै त्यस्तो खालको बाधा अवरोध आएको पनि छैन् । कसैले उल्टो कुरा गरेको पनि छैन् । बरु तलतल कसरी समेट्ने भन्नेमा आवश्यक तथ्याङक संकलन गर्ने कार्यमा जुटौँ । आ–आफ्ना मानसिकता बनाऔँ । सबैलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरौँ । कर्तव्य कसरी पुरा गर्ने, कम्युनिष्ट पार्टीमा रहेका विकृतिलाई कसरी हटाउने, सुद्धिकरणको बाटोमा कसरी लैजाने, क्रान्तिकारीकरण कसरी गर्ने, नयाँ उर्जा कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा लागौँ । हिजोको भूमिगत कालमा जस्तै क्रान्तिकारी भावनाको आवश्यकता अझै छ । त्याग, समर्पण, निस्वार्थ सेवा, कर्तव्यपालना, देशभक्ति, इमान्दारिता र निष्ठाको भावना आज पनि आवश्यक छ । त्यो भावना जगाउन कतै धुलोमैलो जम्मा भएको छ भने पनि सफा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने/बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
प्रश्न नं. ४. कार्यदल सदस्य मन्त्री बन्दा मस्यौदा निर्माणको काममा समस्या भएको हो ?
त्यसले खासै असर किन पनि पार्दैन भने उहाँहरूले नभ्याएपनि भ्याउनेहरू पनि हुनुहुन्छ । स्वभाविक रुपमा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि समय कम दिने स्थिति बन्छ । यताको बैठक बसिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ला, मन्त्रीको विभागीय काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । सकेसम्म मिलाउने प्रयास गर्नुपर्छ । एक÷दुई जना मात्रै भए पो समस्या हुन्थ्यो । हामी त दश÷दश जना छौँ । त्यसकारण केही सदस्य मन्त्री बन्दैमा काम रोकिदैन ।